Sidee warbaahinta caalamka uga falceliyeen rasaastii xalay ka dhacday Muqdisho - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sidee warbaahinta caalamka uga falceliyeen rasaastii xalay ka dhacday Muqdisho
Waxa xalay rasaas fuleynimo ku ridey ciidanka amniga qabqabke Indha-cade ee sheegtay inuu ilaalo u yahay shaqsiyaadka sheegta madasha musharxiinta laakiin ah dhowr qof oo isku jufo ah isku halayna ku qabay in loo soo dareero laakiin habarwacashadii laga diidey maadaama dadka Muqdisho degan fahmeen inaan lagu guuri karin.
Haddaba rasaastii xalay lagu eryaday qabqable INdhacade iyo tii saaka korka loo ridey ee lagu kala dareeriyay jaajuustii u shaqaynaysay kooxda sheegata beesha caalamka, waxa warbaahinta caalamku uga falcelisay dhowr siyaabood.
Aan ku horeyno kuwa taageersan ee soo dirsaday kooxdan sheegatey golaha musharxiinta
Jaraaidka KIiniya ayaa hordhac ka dhigey ”Muqdisho oo markale rasaastu ka dhacayso, waxayna markiiba sheekada ku weecisay dawlada oo ay tiri iyadaa ka masuula. Waxay u sheegeen mucaarad ayaa ka banaanbaxaya doorashada dib oo dhigey.
Idaacada been been sii qaybteeda Ingiriiska oo loo turjumo af-Somali ayaa afka ku balaarsatey aduunka ayaa ka walacsan rasaasta kA dhacaysa Muqdisho. Ku darsoo waxay durba ku baaqaysa in kooxda sheegata beesha caalamka inay soo faragelisho.
Warbaahinada kale ee caalamka ayaa iyagu sheegay in dalka la qasayo ayna ku jiraan dalalka qasaya Imaaraadka iyo Kiiniya iyo weliba qolyaha qaramada midoobey ee Xamar fadhiya. ”Waxay is weydiinayaan maxaa madaxweynahan farta loogu godayaa ilaa xilligii uu ku guulaystey xukunka.